Badbaado Qaran Eray Dhiig­bax ku ah Qarannimada.W/Q: Saciid Cagjar
Badbaado Qaran Eray Dhiig­bax ku ah Qarannimada.W/Q: Saciid Cagjar
Thursday August 31, 2017 - 12:43:06 in by Samiir Cabdi
Erayga Badbaado Qaran ayaa noqotay Kelmad ay inta badan adeegsadaan siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka ah ee loolanka kula jira xukumadda Madaxweyne Siilaanyo oo aan filayo in aanney si rasmiya u lafo-gurin macnaha Erayagaas ku fadhiyo.
Haddaba, waxaa loo Isticmaalaa oo hal-qabsi looga dhigtaa dalalka qalalaasaha iyo colaaduhu ka jiraan si loogu yagleelo ama badhitaaro dawladahooda, waxaanna lala qabtaa ama lala dhisaa xukuumado loogu yeedho Badbaado Qaran, taasi oo meesha looga saarayo dawlad la’aanta iyo colaadaha ka jira dalalka sumadahaas yeesha. Ififilaha, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan iyo meelo kale oo dunidda saddexaad ka mid ah.
Adeegsiga odhaahdan ayaa waxa ugu danbeeyey siyaasiyiin mowqifkooda ku biiriyey xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI oo xilal ka duwan ka soo qabtay xukumadihii Somaliland soo maray iyaga oo bulshadu is waydinaysa sababta ay maanta u arkaan wax aaney shalay arkayn marka ay garoonka ku jireen !
Abwaan Cabdilaahi Xasan Ganey ayaa maanso uu ugu magac daray "Siyaasadu been miyaa” waxaa ku jiray tuduc ahaa :
Ragyahow maad baaban tihiin
Kursigu balwad buu noqdeen
Beryaha aad fuushan tihiin
Barwaaqo miyaa arladu
Barqada xilka aad dhigtaan
Dalku ma bulaacad baa ?
Waxaanay muujinaysaa sidda ay siyaasiyintu u caayaan garashada shacabka, waana nusqaan inteeda leeg in Somaliland oo raasamaalkeeduba yahay nabadgelyada iyo dhismaha haykalka dawladeed inay u adeegsadaan kelmadan soo noqnoqotay ee "Badbaado Qaran”
Somaliland ayaa dalkeeda ka aslaaxisay nabadgelyo aanney beesha caalamku door ku lahayn taasi oo ah mucjiso ay dunida ku majeerato marka ay barbar dhigayaan dhaqaalaha xad dhaafka ah ee ay geliyeen nabadaynta Soomaaliya
Waxaan dareemayaa isticmaalka kelmadani in ay Somaliland ku tahay habaar iyo ihaano, Islamarkaana xad-gudub ku tahay cid kasta oo kaalin ku lahayd nabadaynta dalka iyo shacabka feejigan ee Somaliland labadaba.
Taasi waa sababta aan u leeyahay xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ha naga baandheeyo kelmadaa oo hal qabsi u noqotay olalaha ay ku soo jidanayaan codbixiyayaasha.
Inkasta oo aanan arag barnaamijyada siyaasadeed ee saddexda xisbi qaran ay ku gelayaan doorashada madaxtinimada ee muddaysan dabayaaqada Sannadkan , haddana ma arag Axsaabta qaranka oo meel adag iska taagay ama xukumadda culays ku saraaya in ummadda laga badbaadiyo Sicir bararka iyo sarif bararka noloshooda aafeeyey oo ay ahayd in loo isticmaalo ereygan ay marin habaabiyeen.
Sidoo kale ma arag iyaga oo ka hadlaya in ummadda dawladdu gaadhsiiso adeegyada Biyaha, Caafimaadka iyo Waxbarashada oo intuba lacag ah sidii shacabku ay adeegaydan ugu heli lahayeen lacag la’aan ama qiiimo jaban waana meelaha u baahan in ummadda laga badbaadiyo waxaanse qabaa in aaney badbaado qaran ahayn siyaasiyiin xisbi ka baxay mid kalena u digo rogtay.
W/Q: Wariye Saciid Cagjar